ဖူးနုသစ်: Teach Yourself အနန္တသူရိယ in 10 Minutes
Teach Yourself အနန္တသူရိယ in 10 Minutes
ရာဇဝင်ကို ပြန်ပြောင်း လှန်လှောင်းပြီး ကျန်ကျောင်းလို ကြည့်ရင် မြန်မာ့သမိုင်းထဲမှာ ရှေးအကျဆုံး ကဗျာ သုံးပုဒ် ကို တွေ့ရပါမယ်။ ကဗျာ ၃ပုဒ်ထဲမှာ ရှေးအကျဆုံး ကဗျာ ကတော့ သေလဉ်ကြောင်မင်း လက်ထက်က ရေးခဲ့တဲ့ "သိုးကလေ" အစချီထားတဲ့ ရွှေနှင့်ယိုးမှား ပန်းစကား ကဗျာပါ။ အဲဒီကဗျာရဲ့ နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်းကို Unofficial Guide to မင်းမဟာဂီရိ ဆိုတဲ့ ပို့စ်မှာ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒုတိယမြောက် ရှေးအကျဆုံး တစ်ပုဒ်ကတော့ ကျန်စစ်သားမင်း လက်ထက်က ရေးခဲ့တဲ့ မြကန်သာ ကဗျာပါ။ တိုင်းမသိတော့ ဗာရာဏသီ၊ မင်းမသိတော့ ဗြဟ္မဒတ်၊ ကဗျာစာဆို မသိတော့ အနောနိမတ်စ် ဆိုသလို အဲဒီကဗျာနှစ်ပုဒ်ကို ရေးခဲ့တာက အနောနိမတ်စ် ဆိုသူ များ ပါပဲ။ တတိယမြောက် ကဗျာက တော့ "သူတည်းတစ်ယောက်" အစချီတဲ့ မျက်ဖြေလင်္ကာပါ။ ဒီကဗျာကိုတော့ ရေးတဲ့သူက အနန္တသူရိယ အမတ်လို့ အတိအကျ ဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီကဗျာဟာ ဦးကုလား ရာဇဝင်၊ မှန်နန်းရာဇဝင်စတဲ့ ရာဇဝင်တော်ကြီးတွေ မှာ ပါပေမယ့်လည်း အသုံးအနှုန်း တစ်ချို့ဟာ မြောက်တက်ပြီး ပုဂံခေတ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်လျှင် အပြတ်ကို ဂွမ်းနေတာမို့ တချို့က ပုဂံခေတ်က ကဗျာ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီကဗျာရဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
ကျန်စစ်သားရဲ့ မြေးတော် အလောင်းစည်သူ မင်းကြီးမှာ မင်းရှင်စော နဲ့ နရသူဆိုတဲ့ သားတော် နှစ်ပါး ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ နရသူက သူ့ရဲ့ ခမည်းတော် အလောင်းစည်သူမင်းကြီးကို ရွှေဂူကြီး ဘုရားထဲ ဘတ်ကီးရိုက် ခေါ်သွားပြီးတော့ ခေါင်းအုံးတွေ စောင်တွေနဲ့ ဖိသတ်လိုက် ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အလောင်းစည်သူ တကယ်ပဲ အလောင်းဖြစ်သွား ရှာပါတယ်။ အလောင်းစည်သူ သေတော့ သားတော်ကြီး မင်းရှင်စောက ဘုရင် ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းရှင်စော ဘိသိက်သွန်းမြောက်ပြီး ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ နေ့မှာပဲ နရသူက ညနေစာ စားပွဲတော်မှာ အဆိပ်ခတ် သတ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နရသူ ဘုရင်ဖြစ်လာပါတယ်။
နရသူ ဘုရင်ဖြစ်လာတော့ မိုက်ကယ်တွေ လျှောက်လုပ်ပါတော့တယ်။ နရသူ အဲဒီလို ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း အုပ်ချုပ်တာကို ပုဂံပြည်သူပြည်သားတွေ ကြည့်မရကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း နရသူက "ပုဂံမှာ ဘုရင်တွေ ပိုနေလို့ တမလွန်ကိုတောင် အိတ်စပို့ ပို့နေရတာ။ မည်သို့သော ကန့်ကွက်မှုများ ရှိသည်ဖြစ်စေ ပုဂံကို ဆက်လက်အုပ်ချုပ်သွားမည်" ဆိုပြီးတော့ ဆက်ပြီး အုပ်ချုပ်ပါတယ်။ နောက်တော့ သူ့ကို ဆက်လာတဲ့ ဘောလိဝုဒ်က ကုလား မင်းသမီးကိုပါ သတ်ပစ်လိုက်တဲ့ အတွက် ကုလားဘုရင်တွေကပါ နရသူကို တင်းသွားကြ ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် နရသူကို သမဖို့ အတွက် ဆူဆိုက်အကြမ်းဖက်သမား ကုလားဟူးရား ၈ ယောက်ကို လွှတ်လိုက် ပါတယ်။ ကုလား ဟူးရား ၈ ယောက်က နရသူကို ဘိသိက်မြှောက် ပေးမယ်လို့ ဘတ်ပြီး သန်လျှက်နဲ့ ဝိုင်းကျွေးလိုက်ကြတာကြောင့် နရသူ ကြွသွားပါတယ်။ နရသူကို သတ်ပြီးတော့ ကုလားဟူးရားတွေ သူတို့ဘာသာ ဆူဆိုက် လုပ်လိုက်ကြပါတယ်။ ကုလားတွေက ဝိုင်းလျှော့လိုက်လို့ သေသွားတာမို့ နရသူကို ကုလားကျမင်းလို့ နောက်လူတွေက ခေါ်ကြပါတယ်။ နရသူသေတော့ သူ့မှာ မင်းယဉ် နရသိင်္ခနဲ့ နရပတိစည်သူ ဆိုတဲ့ သားနှစ်ယောက် ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ထဲမှာ သားတော်အကြီး မင်းယဉ်နရသိင်္ခက ဘုရင်ဖြစ်လာပါတယ်။
ဘုရင်ကို ဆိုရင် အကိတ်ကလေးတွေ အလန်းကလေးတွေ မိဖုရားအဖြစ် ဆက်ချင်တဲ့သူက ပေါပါတယ်။ တစ်ခါတော့ မင်းယဉ်နရသိင်္ခ မြင်းစိုင်းဝက်ဝံ လို့ခေါ်တဲ့ အရပ်ကို ဖလမ်းဖလမ်းထရင်း ရောက်သွား ပါတယ်။ အဲဒီအရပ်က တောထဲမှာနေတဲ့ ပြော့လူမျိုးတွေက ဘုရင်ကို သမီးကညာ တစ်ပါး ဆက်ပါတယ်။ အဲဒီ သမီးကညာ ရဲ့ အမည်က ဝေဠုဝတီလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပါဠိလို ဝါးကို ဝေဠုလို့ ခေါ်တာမို့ ဝေဠုဝတီဆိုတာ ပရင့်ဆက်စ် အော့ဖ်ဝါးလို့ တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ရမယ် ထင်ပါတယ်။ ဝါးပင်က မွေးတာမို့ သူမမှာ အဲဒီလို နာမည်တွင်တယ် ဆိုပါတယ်။။ ဒဏ္ဍာရီလို့ပဲ မှတ်လိုက်ပါတော့။ ဝါးပင်က မွေးတယ် ဆိုတာ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်တော့ အင်္ဂုလိ ပဲ ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ ပြော့လူမျိုးတွေ ဆက်တဲ့ ဝေဠုဝတီမှာ ချို့ယွင်းချက် တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ နားရွက် နည်းနည်း ကျယ်နေတာပါ။ ဒါကို ဘုရင်မြင်တော့ "နားကျယ်နဲ့ ဝမ်းပျက်လိလိ" လို့ မိန့်တယ် ဆိုပါတယ်။ မိဖုရားနားကျယ်တာနဲ့ ဘုရင် ဘယ်လို ဝမ်းပျက်မလဲ ဆိုတာတော့ ဆက်စပ်ကြည့်လို့ မရပါဘူး။ အဲဒီ စကားကို အဓိပ္ပာယ် မဖော်တတ် တဲ့ အတွက် နားကျယ်တဲ့ အတွက် မမိုက်၊ အဲဒီအတွက် အီဖေကို ဘုရင် မကြိုက်လို့ပဲ အဓိပ္ပာယ်ပြန်လိုက်ပါမယ်။
ဘုရင် မကြိုက်တော့ ညီတော် နရပတိစည်သူကို စွန့်လိုက်ပါတယ်။ နရပတိစည်သူ လက်ထဲရောက်တော့ နရပတိစည်သူရဲ့ အမေ ဝေဠုဝတီရဲ့ ယောက္ခမကြီးက သူ့ချွေးမရဲ့ နားကို ပလတ်စတစ် ဆာဂျရီ လုပ်ပေးလိုက် ပါတယ်။ နားပြင်ပြီး ရှိုင်းနင်းဂွိုင်းနင်းတွေ လုပ်လိုက်တော့ ဝေဠုဝတီက အတော် လန်းသွား ပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ ယောက္ခမကြီးက သူ့ချွေးမကို နန်းတော်ထဲ ခေါ်လာတဲ့ အခါ မင်းယဉ်နရသိင်္ခမှာ လွတ်သော ဖစ်ရှ် ဘစ်တယ်ဆိုပြီး ကြိတ်မနိုင် ခဲမရတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ခယ်မတော် ဝေဠုဝတီ ကို ကြည့်ရင်း ဖီးလ်တွေ တက်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူလည်း ကလိမ်ကကျစ် လုပ်တဲ့နေရာတော့ အဖေ နရသူရဲ့ သွေးပါပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဉာဏ်နီ ဉာဏ်နက် ဉာဏ်ခရမ်းရောင် ဉာဏ်လိမ္မော်ရောင်တွေ ထုတ်ပြီးတော့ ညီတော်ကို ပထုတ်ဖို့ ကြံပါတယ်။ ငဆောင်ချမ်းမှာ သူပုန်ထလို့ သွားတိုက်စေဆိုပြီး ညီတော်ကို ပထုတ်လိုက်ပါတယ်။
နရပတိစည်သူကလည်း အချဉ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူက ဘုရင် သွားဆိုလို့သာ သွားရပေမယ့် သိပ်မသင်္ကာပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ ဘော်ဒီဂတ် မြင်းခံတော် ငပြည့်ကို အကြောင်းထူး ရင် သတင်းပို့ဖို့ သူ့မြင်းကို ပေးပြီး မှာခဲ့ပါတယ်။ နရပတိစည်သူက သစ်ဆိမ့်အရပ်ကို ရောက်တော့ ငဆောင်ချမ်းမှာ သူပုန် မရှိကြောင်း ကြားတာမို့ သူ့အစ်ကို သူ့ကို ဂျင်းထည့်လိုက်ပြီ ဆိုတာ သိသွားပါတယ်။ နရပတိစည်သူ စစ်ထွက်သွားတော့ သူ့အစ်ကိုက ဝေဠုဝတီကို မိဖုရားအဖြစ် ဆွဲစိလိုက် ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းကို ကြားကြားချင်း ငပြည့်လည်း မြင်းကို ဒုန်းစိုင်းစီးပြီး နရပတိစည်သူ နောက်ကို လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ညနေစောင်းတော့ ငါးဘတ်ချောင်းကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ငပြည့်လည်း နေဝင်ရီတရောမို့ ချောင်းထဲမှာ ရေမရှိတာကို ရေထင်ပြီး ဖြတ်မကူးရဲပါဘူး။ မြင်းကလည်း အတော်ပြိုင်းနေပြီမို့ ချောင်းဘေးက တောထဲမှာပဲ တစ်ညစာ ကျိုးနေလိုက်ပါတယ်။ နရပတိစည်သူနဲ့ အလွန်နီးနေပြီမို့ မြင်းက သူ့သခင်ရဲ့ အနံ့ကို ရလို့ တစ်ညလုံး ဟီတယ်ဆိုပါတယ်။ နရပတိစည်သူလည်း သူ့မြင်းဟီသံကို ကြားတော့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ပြီး "ငါ့မြင်းအသံဆိုရင် ခေါင်းအုံးပေါက်စမ်းကွာ" ဆိုပြီး ခေါင်းအုံးကို လက်သီးနဲ့ ထိုးလိုက်တာ ခေါင်းအုံးပေါက်သွားတယ် ဆိုပါတယ်။ ဒီမင်းသားလည်း လူလည်ပါ။ အမှန်တကယ်ဆို အုတ်နံရံ ဖြစ်ဖြစ် ၊ သစ်ပင် ဖြစ်ဖြစ် ထိုးကြည့်သင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ တော့ ငပြည့်က သူ့ရဲ့ အာစရိ နရပတိ စည်သူကို သတင်းပို့ပါတယ်။ နရပတိ စည်သူက ဒေါခွီးပြီး ပတ်ရမ်းပါတယ်။ ငပြည့်ကို ညက ဘယ်မှာ အိပ်သလဲ မေးတော့ သူနဲ့ မနီးမဝေး တစ်နေရာမှာ အိပ်တယ်ဆိုတာ သိသွားပါတယ်။ "ဒီလောက် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စငါ့ကို သတင်းမပို့ဘဲ နှပ်နေတယ်။ ငါတို့ အတွက် အချိန်ဟာ ကားပါမစ်လို တန်ဖိုးရှိတယ်။ ခဏကြံရင် ထရံတောင် ခြံတိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မသိဘူးလား။" ဆိုပြီး သတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ငပြည့်မှာ ဆန္ဒန်ဆင်မင်းဇာတ်နဲ့ စေတနာက ဝေဒနာဖြစ်ရတယ် ဆိုပြီး ငိုပြဖို့တောင် အချိန်မရလိုက်ပါဘူး။ ငပြည့် အလောင်းကို ရေထဲမျှောလိုက်ပြီး တစ်နေရာမှာ သွားတင်နေတော့ အဲဒီနေရာမှာ နတ်ကွန်းဆောက် ကိုးကွယ်တယ် လို့ ပြောကြပါတယ်။ ငပြည့်ဟာ အခု နတ်လောကမှာ ဆရာကြီးတစ်ဆူ ဖြစ်နေတဲ့ မြင်းဖြူရှင်နတ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
နောက်တော့ သူ့ရဲ့ ပီအေ အောင်စွာငယ်ကို ခေါ်ပြီး မင်းယဉ်နရသိင်္ခကို လုပ်ကြံဖို့ ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ အောင်စွာငယ်ကို မက်လုံးပေးတဲ့ အနေနဲ့ ဘုရင်ကို သတ်ပြီးရင် ဘုရင့်မိဖုရားထဲက ကြိုက်တဲ့ တစ်ယောက် ပေးမယ်ကွာ ဆိုပြီး ပြောလိုက်ပါတယ်။ အောင်စွာငယ်လည်း မိဖုရားတစ်ယောက်တော့ ရရချည်သေးရဲ့ ဆိုပြီး ဘုရင်ကို လုပ်ကြံလိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ နရပတိစည်သူ နန်းတော် ပြန်ရောက်ပြီး ဘုရင် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အောင်စွာငယ်က သူ့ကို မင်းယဉ်နရသိင်္ခရဲ့ မိဖုရားတွေထဲ က တစ်ယောက်ကို စွန့်ဖို့ တောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရင် ဘုရင်ရဲ့ မိဖုရားတွေက "မောင်လေးရယ်။ မမတို့က မောင်လေးနဲ့ ဆိုရင် မရီးတော်တယ်လေ။ အဲဂလို မလုပ်ပါနဲ့လားကွယ်။" ဆိုပြီး ငိုပြကြတော့ နရပတိစည်သူ စိတ်ပြောင်းသွားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မင်းကို တခြားတစ်ယောက်ပေးမယ်။ ငါ့မရီးတော်တွေတော့ မယူနဲ့တော့ ဆိုပြီး အောင်စွာငယ်ကို ကပ်ချုပ်ကြည့်ပါတယ်။ အောင်စွာငယ်က ဘုရင် ကတိမတည်ဘူး ဆိုပြီး ထွီဆိုပြီး တံတွေး ထွေးလိုက်တဲ့ အတွက် ဘုရင်က နှာကစ်ပြီး ထတီးလိုက်တာ ဂန့်သွားပါတယ်။ နောက်တော့ ငါ့ ပီအေကို ငါကတိပေးထားပြီး မတည်တာ ငါမှားတာပဲ လို့ တွေးမိပြီး အောင်စွာငယ်ကို နတ်ကွန်းဆောက် ကိုးကွယ်စေလို့ အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ၃၇ မင်းထဲက အောင်စွာနတ်ပါ။
နောက်တော့ သူတို့ခေတ်က ထုံးစံအတိုင်း မင်းယဉ်နရသိင်္ခနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ သူတွေကို ဖြုတ်ထုတ်သတ် လုပ်ပါတော့တယ်။ အဲဒီ အထဲမှာ မင်းယဉ်နရသိင်္ခရဲ့ အထိန်းတော်သား အနန္တသူရိယ အမတ်လည်း ပါပါတယ်။ အနန္တသူရိယက သူ့ကို မကွက်မျက် ခင်မှာ ဘုရင်ကို ဆက်ဖို့ ကဗျာတစ်ပုဒ် ရေးခဲ့ပါတယ်။ ကဗျာကို ဖတ်ပြီး အနန္တသူရိယကို လွှတ်စေ အမိန့်ချတော့ ပါးကွက်အာဏာသားတွေက သတ်ပြီးကြောင်း ပြောပါတယ်။ အဲဒီတော့လည်း ပါးကွက်အာဏာသားတွေကို ငါ့အမိန့်မစောင့်ရကောင်းလား ဆိုပြီး ထပ်ပြီး သတ်ပြန်ပါတယ်။ အဲဒီလို သူသတ် ကိုယ်သတ် အားလုံးသတ်တဲ့ ခေတ်ထဲက ထွက်လာတဲ့ ကဗျာကတော့ ကဗျာဆရာ သေခါနီး ခံစားချက်တွေ တနင့်တပိုးနဲ့ ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာမို့ စာသားတွေ အမှန်အကန်နဲ့ သမိုင်းတွင်ကျန်ရစ်ပါတယ်။
Posted by ZT at 7:18 PM
Labels: ကဗျာ, ပေါက်တတ်ကရ, သမိုင်း
ေပါက္လင့္ကာသာ ဓမၼတာတည္း…. (သမိန္ေပါသြပ္ ကာတြန္းမွ)
one of my fav: poem and loving your script :D
i love your writing style. and i always read ur post. you are kind of witty. by the way, your April fool post has come true now...keep it up the good work , bro.
အခုခတ္အေနနဲ႔ၾကည့္လုိက္ရင္ေတာ္ေတာ္ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ႏုိင္တယ္...အားေနရင္မိန္းမယူ စည္းစိမ္ခံ အခြန္ဆက္သတာေတြယူ ၿပီးေတာ့ဘာမွလည္းဟုတ္တိပတ္တိလုပ္ေပးတာလဲမဟုတ္ဘူး....ေတာ္ေသးတာေပါ႔..ဘုရင္စနစ္မရွိေတာ့လုိ႔
ေတာ္ၾကာ တခ်ိန္လံုးလုိက္ၿပီး ေတာ္ေကာက္ေနရင္ ကုိယ့္အစ္မေတြႏွစ္မေတြ ဘယ္မွာထားရမွန္းေတာင္သိမွာမဟုတ္ဘူး..ဒီၾကားထဲ ကုိယ့္အေဖကုိလုပ္ၾကံလုိက္ သတ္လုိက္ျဖတ္လုိက္နဲ႔
“နားက်ယ္နဲ႔ ၀မ္းပ်က္လိလိ” ဆိုတာ နားရြက္ကႀကီးၿပီးက်ေနတာရယ္၊ ဗိုက္ပူတာရယ္ေၾကာင့္လို႔ ဖတ္ဖူးပါတယ္၊ မိဖုရားေခါင္ႀကီးက အဲဒီႏွစ္ခုလံုးကို ျပင္ေပးလိုက္ေတာ့ အရမ္းလွသြားတယ္လို႔ ေျပာတယ္.....
ဘဏ်နှင့် လူတို့ အကြောင်း
ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့သော နေ့စွဲတစ်ခု